Uzibulele umfundisi obesolwa ngelokudlwengula | isiZulu
Uphinde wanqatshelwa ibheyili umfundisi odabuka eNigeria
Unqatshelwe ibheyili umfundisi osolwa ngokudlwengula
'Asivoteli umfundisi', kusho abe-Cosatu beseka uRamaphosa
Johannesburg - Ushonele esibhedlela umfundisi wase-Eden Park eKempton Park kulandela imizamo yokuzibulala.
Lo mfundisi uzame ukuzibulala ngemuva kwezinsolo zokudlwengula intombazane, 15.
Amaphoyisa ase-Eden Park athe abizelwe emtholampilo wendawo mayelana nesigameko sokudlwengulwa kwentombazane, kubika i-Alberton Record .
Ngokusho kukaCaptain Vusi Mhlophe, ngesikhathi le ntombazane iphuthunyiswa esibhedlela iThelle Mogoerane, eVosloorus, umsolwa waya kwakhe wafike wathatha ummese wazama ukuzisika intamo waphinde wokhela igumbi alala kulo ngomlilo.
OLUNYE UDABA:Umfundisi 'udlwengule' wakhulelisa ingane ekhubazekile
"Ngesikhathi amaphoyisa efika, athola umsolwa engaphandle nommese ogcwele igazi, esikekile entanyeni futhi eshile kodwa esaphefumula. Le ndoda yabe isiphuthunyiswa esibhedlela, ngeshwa ishonele khona ngomhlaka-12 Septhemba kulandela usuku eyazama ngalo ukuzibulala," kusho uMhlophe.
Amaphoyisa aqhube ngokuthi umama wentombazane wenza isitatimende esiveza ukuthi indodakazi yakhe yamvusa ngezithuba zabo-03:30 ekuseni ikhala ngezinhlungu esithweni sayo sangasese.
"Njengamanje siphithene amakhanda ngemiphumela yasesibhedlela. Ngokusho kombiko kadokotela, akutholakalanga lutho ewubufakazi bokuthi le ngane idlwenguliwe. Sisalinde eminye imiphumela," kusho uMhlophe
Emizuzwini eyi-11 edlule